नेपालमा ९९ प्रतिशत सङ्क्रमित लक्षणविहीन, ९७ प्रतिशत आयातित | Sagarmatha TV
काठमाडौँ- नेपालमा ९९ प्रतिशत कोरोनाभाइरसका लक्षणविहीन ‘असिम्प्टोम्याटिक’ बिरामी रहेका छन् ।
पुष्टि भएको ९७ प्रतिशत बिरामीमा सङ्क्रमण आयातित छन् । नेपालमा १६ हजार १६८ जनामा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । जसमध्ये अधिकांश लक्षणविहिन बिरामी फेला परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा हालसम्म दुई लाख ६० हजार व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गरिएकोमा ९९ प्रतिशत बिरामी लक्षणविहीन फेला परेको जनाएको छ । सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले लक्षण भएका सङ्क्रमितको संख्या एक प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको खुलाउनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालसम्म १२ हजार सङ्क्रमितको परीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गरेको छ । डा. पाण्डेले अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनमध्ये दशमलब पाँच प्रतिशत मात्रै लक्षण भएको बिरामी फेला परेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्म २५९ जना सङ्क्रमित पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले काठमाडौंमा १७५, ललितपुरमा ४१ र भक्तपुरमा ४३ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौँमा १७५, ललितपुरमा ४१ र भक्तपुरमा ४३ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको बताउनुभयो ।
प्रभु बैंकले कोरोना कोषमा फेरि सहयोग गर्यो १ करोड ३९ लाख